Computer Hardware တွေကို ဘာကြောင့်လေ့လာသင့်သလဲ ? - Active IT
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကွန်ပျူတာနဲ့ နေတိုင်းထိတွေ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူအများစုဟာ Computer Hardware တွေကို လေ့လာတာဟာ ဆားဗစ်စင်တာတွေက တက်ကနစ်ရှန် တွေအလုပ် ငါတို့သိဖို့မလိုဘူးရယ်လို့ ယူဆထားလေ့ ရှိတယ်..
နောက်ဆုံး အိုင်တီသမားစစ်စစ်ရယ်လို့ ပြောရမယ့် Programmer တချို့ဆီမှာတောင်အဲ့လို အတွေးမျိုးရှိတယ်.. ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ဒါဟာ တော်တော်လွဲမှားတဲ့အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. ကိုယ်က ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ နေစဉ်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူဆိုရင် အိုင်တီသမားစစ်စစ်မှရယ်မဟုတ်ဘူး ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်နာ၊ စာရင်းကိုင်၊ ဗွီဒီယို အယ်ဒီတာ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျူတာ Hardware တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနားလည်အောင်လုပ်ထားသင့် ပါတယ်..
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Professional ဖြစ်လာပြီဆို ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ရဲ့ အတိုင်းအတာကို ကိုယ့်လောက် ဘယ်သူမှမသိပါဘူး.. အဲ့အခါမှာ ကိုယ်အလုပ်နဲ့ သင်တော့်မယ့် စက်ကိုရွေးချယ်ဖို့က ကိုယ့်မှာတာဝန်အရှိဆုံး ဖြစ်ပါတယ်..
ဆိုင်တွေကသိတယ်ဆိုတာ အသုံးများတဲ့အဆင့်အထိပဲသိတာပါ.. ဥပမာ ကိုယ်က ဂိမ်းနည်းနည်းပါးပါး ဆော့ဖို့လောက်ဆို ဘယ်လောက်သုံးရင် အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့ .. သူတို့အဲ့လို ညွှန်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် အားလုံးကို သူတို့လက်ထဲပုံပြီးယုံလို့မရပါဘူး..
ဥပမာ လူအယောက် တစ်ရာလောက်သုံးမယ့် SharePoint Server တစ်ခုအတွက် Setup လိုမျိုးကို ဆိုင်တစ်ရာမှာ ကိုးဆယ့်ကိုးဆိုင်လောက်က မသိပါဘူး.. ကျွန်တော့် အတွေ့ အကြုံအရတော့ တစ်ရာမှာ တစ်ဆိုင်မှ မသိပါဘူး.. အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ Developer ကိုယ်တိုင်က စက်က ဘယ်နှစ်လုံးလိုမယ်.. Database အတွက် စက်ကိုဘယ်လိုဆင်မယ်. SharePoint Frontend အတွက်က ဘယ်လောက်လိုမယ် ဆိုတာလိုမျိုး ပြောနိုင်ရပါတယ်.
AMD ရဲ့ Ryzen CPU တွေထွက်လာတော့ Workstation တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ လူအများစု စိတ်ဝင်စားကြတယ်. ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၈ နှစ်လည် မတိုင်ခင်အထိတော့ Ryzen, Windows, Android Emulator စတဲ့ အတွဲအစပ်ဟာအလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက် Ryzen တွေဟာ နောက်ဆုံးပေါ် Stock ROM တွေကိုသုံးချင်တဲ့ Android Developer တွေအတွက် ရွေးချယ်စရာ မဟုတ်ခဲ့ဘူး. မှားပြီးဆင်မိတဲ့ Developer တွေကတော့ Visual Studio က Emulator လိုမျိုးကိုသုံးရတာ.. ဒါမှမဟုတ် Linux ကိုပြောင်းသုံးရတာလိုမျိုး အခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်..
ဒါဟာ ကျွန်တော်သိသလောက်ထဲက အနည်းအကျဉ်းလောက်ကို ပြောပြတာလောက်ပဲ.. တကယ်တမ်းမှာ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်နဲ့ သင့်တော်မယ်စက် မရွေးတက်လို့ တက်တဲ့ ပြဿနာတွေဟာအများကြီးပဲ.. 3D Modeling လိုမျိုးကို တစ်ရုံးလုံး Laptop လေးတွေနဲ့ထိုင်လုပ်တာလိုမျိုး… သန်းနဲ့ချီတဲ့ Row တွေရှိတဲ့ data တွေကို laptop လေးတစ်လုံးနဲ့ Excel ထဲ Data Analysis လုပ်တာလိုမျိုး ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း အထီးမှန်း အမမှန်းမသိလို့ မလိုအပ်ဘဲ လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုလုံးနှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေမျိုးတွေကို မမြင်ချင်အဆုံး တွေ့ခဲ့ဖူးတယ် ..
အဲ့တော့ ကိုယ်က နေ့တိုင်းလို ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူဆိုရင် ကိုယ်လုပ်မယ့် အလုပ်အတွက် ဘယ်လိုစက်မျိုးသုံးရင်သင့်တော်မယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်တက်အောင် Hardware တွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ လေ့လာထားသင့်ပါတယ်